"२४ वर्ष क्यानमा रगत पसिना बगाएँ, त्यसको कदर भएछ भने कुशल नेतृत्त्व दिन्छु !'' (भिडियो सहित) | Kendrabindu Nepal Online News
21175952 759395 6428673 13987884
“२४ वर्ष क्यानमा रगत पसिना बगाएँ, त्यसको कदर भएछ भने कुशल नेतृत्त्व दिन्छु !” (भिडियो सहित)
६ मंसिर २०७६, शुक्रबार १७:४४
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघको १३ औं महाधिवेसन मंसिर ७ गते हुने भएको छ । अध्यक्षका प्रत्यासी नवराज कुँवर अहिले जोडतोडले प्रचारमा लागेका छन् । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुँवर हरेक चुनौती पन्छाउँदै विजयी हुनेमा आश्वस्त छन् । उनको प्यानलले तयार गरेको एजेण्डा, क्यानको भावी कार्यदिशा र समग्र सूचना प्रविधिको विषयमा नवराज कुँवरसँग केन्द्रबिन्दुले गरेको कुराकानी —
अध्यक्षको प्रत्यासी हुनुहुन्छ ? चुनाव कत्तिको लागेको छ ?
यो महाधिवेसन हो । एक किसिमले भन्नुपर्दा हामीले एक पर्वको रूपमा लिएका छौं । २–२ वर्षको अवधिमा महाधिवेसन हुने गर्छ । २ वर्षपछि नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । त्यो नेतृत्वमा आफ्नो उम्मेद्वारी दिने र मतदाताहरूसँग मत माग्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ र म पनि अहिले त्यहि क्रममा सबै मतदाताहरूको घर घरमा गएर मत मागिरहेको छु ।
दुईजना अध्यक्षको प्रत्यासी हुनुहुन्छ, सर्वसम्मत बनाउने कोसिस गर्नु भएन ?
सर्वसम्मत रूपले अध्यक्ष चयनका लागि धेरै कोसिस भए । म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएका नाताले अध्यक्षमा स्वतः जानुपथ्र्यो । तर अरू साथीहरूले इच्छा राख्नु पनि स्वाभाविक कुरा हो र पनि हामीले मिलेर जाऊँ, क्यानलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष दिऔँ भन्ने हिसाबले छलफल पनि गर्‍यौं । छलफलमा म अध्यक्षमा जाने र मेरा साथी वर्तमान उपाध्यक्ष सुनैना पाण्डे वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जाने भनेर लगभग टुङ्गो लाग्यो । तर पछि उहाँले के सोचेर हो कुन्नि, अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिन्छु भन्नु भो । उम्मेद्वारी दिन नपाइने भन्ने त छैन ।
यो कहिलेको कुरा हो ?
लगभग ३ महिनाअघिको कुरा हो ।
त्यसपछि तपाईहरूबीच के भयो र उहाँ अध्यक्षमा उठ्ने कुरा भयो ?
बीचमा त्यस्तो केही भएको छैन, अहिले पनि भएको छैन भन्छु म । मैले भनेँ नि, इच्छा सबैको हुन्छ इच्छा राख्न पाइन्छ । उहाँले अब म पनि इच्छा राख्छु म पनि मैदानमा जान्छु अब मतदाताहरूले तपाईंलाई छाने पनि ठीक छ मलाई छाने पनि ठीक छ भनेर उहाँ पनि अगाडि बढ्नु भो । हामीबीच सम्बन्ध नराम्रो अथवा यो त्यो भएर चाहिँ होइन । हामी ७ गतेसम्म आआफ्ना प्यानलमा हुन्छौं र ८ गतेपछि जस्ले जिते पनि क्यानका लागि चाहिँ एकैठाउँमा बसेर काम गर्छौं ।
यो अहिले चुनावी हिसाबचाहिँ तपाईंले कसरी गर्नुभएको छ ? धेरैले के भन्छन् भने काठमाडौंभित्र सुनैना पाण्डेको राम्रो छ र काठमाडौं बाहिर तपाईको राम्रो छ ।
यो चुनावी माहोललाई धमिल्याउने षडयन्त्र हो । हामी सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, अहिले प्रविधिले संसारलाई एकै ठाउँ बनाइसकेको छ । मान्छे काठमाडौं बसेर बाहिरको काम गर्न नसक्ने वा बाहिर बसेर काठमाडौंमा काम गर्न नसक्ने भन्ने हुदैन । हामीले जुनसुकै ठाउँबाट काम गर्न सक्छौं । त्यो त मतदाताहरूलाई भ्रममा पार्न सिर्जना गरिएको कुरा मात्र हो ।
यसले भ्रम कसरी हुन्छ र ? जस्तो राजधानी बाहिर तपाईको राम्रो भनेपछि धेरै भोट त राजधानी बाहिरबाट होला नि त ?
मेरो लागि भन्नुहुन्छ भने १ हजार २ सय मतदाता बराबर हुन् । एउटा प्रक्रिया के छ भने मैले क्यानमा १९९२ मा संगठन भयो र मैले १९९५ मा सदस्यता लिएँ । त्यसपछिका दिनहरूमा क्यानलाई उपत्यका बाहिर मिसनको रूपमा लानुपर्छ भनेर अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेँ र त्यो अभियन्ताको रूपमा जिल्लाहरूमा म लोकप्रिय हुन पुगेँ । म जिल्लाहरूमा लोकप्रिय हुँदैमा काठमाडौंमा नभएको भन्ने होइन । फेरि मैले श्रद्धेय पूर्वअध्यक्षहरू चारपाँच जनासँग कार्य गर्ने मौका पाएँ । उहाँहरूले मेरो कार्य क्षमता देखेर नै एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो । क्यानलाई नेपालभरि लानुपर्छ भन्ने अभियान दिनु भो र त्यो अभियानमा म सधैंभरि जुटेँ ।
फलस्वरूप अहिले ४८ वटा जिल्ला र ५ वटा प्रदेशमा हामीले गठन संघ गरिसकेका छौँ र केन्द्रीय रूपमा ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंलाई केन्द्र मानेर अघि बढिरहेको अवस्था छ । तर अझै पनि महासंघको अवधारणामा हामी गईरहदा हामीले हाम्रो संगठनलाई अझ परिस्कृत गर्न बाँकी छ । त्यो क्रममा म निरन्तर लागिरहेको छु ।
सुरुमा सहमति भएको थियो र पछि फेरि सहमति भएन ? त्यसैले दुई जना उम्मेद्वार उठ्नु भयो ? तपाईहरूको बिचमा एजेण्डामा कुरा मिलेन कि ? जस्तै तपाईले उठाउने एजेण्डा र उहाँले उठाउने एजेण्डा ?
एजेण्डाको सन्दर्भमा पछि हामी दुईवटा प्यानल भएपछि हामीले आआफ्नो एजेण्डा उठाएको विषय हो । सुरुमा चाहिँ हामी एउटै टिमबाट लड्यौं र कार्य समितिमा रहेका साथीहरू अधिकांश दुई तिहाई साथीहरू बसेर छलफल गरेर यसलाई एउटा व्यवस्थित तरिकाले वरिष्ठ अध्यक्षचाहिँ अध्यक्ष हुने उपाध्यक्ष वरिष्ठ अध्यक्ष हुने यसरी अपग्रेड हुने तरिकाले जाऊँ भनेर एउटा सहमति भएको हो । त्यो भन्दा बढी एजेण्डाको सन्दर्भमा चाहि त्यो बेला हामीले छलफल गरेनौं । महत्वाकांक्षा बढी भएका कारण निर्णय बीचमा टुट्यो ।
चुनावमा गइसक्नुभएको छ, ७ गते चुनाव हुँदै छ ? तपाईको जित्ने आधारचाहिँ के के हुन् ?
मैले तीनचारवटा आधार देखेको छु । पहिलो कुरा त अहिले कार्यशैलीमा सबैभन्दा पुरानो व्यक्ति म हुँ । चाहे त्यो साधारण अथवा केन्द्रिय कार्यसमितिमा बसेर काम गरेको व्यक्ति भन्नुहोस् । म धेरै पटक केन्द्रिय समितीमा बसे महासंघ बसिसकेपछि केन्द्रीय सदस्यको रूपमा आएँ र अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा छु ।
अर्को कुरा के छ भने गत कार्य समितिले मलाई सर्वसम्मतिले वरिष्ठ चुनेको हो । त्यति बेलै मैले के बुझेँ भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनिनुको अर्थ अध्यक्षको तयारीको लागि हो । मैले त्यसै हिसाबले आफ्नो तयारी गरें ।
तेस्रो कुरा के छ भने क्यान १९९२ मा स्थापना भएर अघि आयो । त्यतिबेला नेपालमा सूचना प्रविधिको सरकारी तहमा पनि न कुनै निकाय थियो न कुनै मन्त्रालय । त्यो अवस्थाबाट क्यान बबढ्दै गर्दा म त्यसमा गासिएँ र गाँसिइसकेपछि मैले धेरै पूर्वाध्यक्षहरूको पालामा सँगै बसेर काम गर्ने मौका पाएँ ।
यसले गर्दाखेरि क्यान महासंघ कुन दिशातर्फ जानुपर्छ भन्ने र यसको दिशानिर्देशन के हुन सक्छ भन्ने कुरा मलाई धेरै लामो अनुभव छ । त्यो अनुभवका कारणले पनि मलाई रोजाइमा पार्नुहुन्छ र मत दिनुहुन्छ भन्ने आशा मैले राखेको छु ।
तपाईले घोषणा पत्र पनि तयार पार्नुभएको होला ? घोषणा सभा पनि गर्नुभयो ? आम मतदाताहरूलाई तपाईहरूले मलाई यो यो कारणले भोट दिनु भन्नु भयो होला के छन् त तपाईका एजेण्डाहरू ?
मैले एजेण्डा त १५ वटा प्रस्तुत गरेको छु र एजेण्डा मैले आफैले कपीमा लेखेर र मैले बोलेर मात्रै हिँडेको छैन । सबै मतदाताहरूलाई बोलाएर यो यो काम गर्न सक्छु भनेर मैले घोषणासभा गरेँ । त्यो घोषणासभा गर्नुको तात्पर्य के थियो भने भोलि मेरो कार्यकालमा मेरो प्रतिबद्धताहरू कतै चुक्यो भने सदस्य साथीहरूले अझै साथ दिनुहुन्छ भनेर गरेको हुँ ।
क्यानले तीन कुरालाई हेर्नुपर्छ । महासंघसँग आबद्ध भएका सदस्यहरूको हकहित र अधिकारका लागि काम गर्नैपर्छ । हाम्रो महासंघको प्रकृति अलिकति फरक छ । त्यहाँ संस्था नि हुन सक्छ सेक्टर पनि हुन सक्छ जिल्ला पनि हुन सक्छ । महासंघमा जादा अझै हामीले कति कुरा समेट्न सकेका छैनौं । ती कुराहरूलाई मिलाएर लाने एउटा बाध्यता छ । ७ वटै प्रदेशमा प्रसाशनिक भवन बनाउनु पर्छ भन्ने मैले राखेको छु । विश्व अथवा देशलाई हेर्ने हो भने जहाँ सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको क्षेत्र अथवा देश अघि बढेको पाउछौं ।
सरकारले आशालाग्दो एउटा नारा लिएर आएको छ– ‘समृद्ध नेपाल सुखी जनता’ त्यो नारा सँगसँगै सरकारले आफ्नो कार्ययोजना अन्तर्गत सूचनालाई एउटा आधार बनाएको देखेका छौं । त्यसैले अब नेपालमा सुचनाको विकास गर्न सहज हुन्छ किन भने सरकारले गर्दिने महत्वपूर्ण काम भनेको इन्फ्याक्ट सेक्टर विकास गर्दिने हो र हामीसंग जति पनि भएको व्यावसायिक साथीहरूसँग समस्या के छ भने सूचना प्रविधिका सामान भनौं अथवा सेवा आयात निर्यात गर्न समस्या छ त्यहाँ क्यानले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले जोडेको छु ।
नेपाल सरकारले अहिले भिजिट नेपाल २०२० को अभियान अघि सारेको छ । यसलाई सफल बनाउन सूचना प्रविधिको तर्फबाट पर्यटकीय क्षेत्रलाई सहयोग हुने अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्नपर्छ । नेपालका युवाहरू विदेशिइरहेको अवस्था उनीहरूको लागी रोजगार सिर्जना गराउन सक्यौं भने ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्छौं र विदेशिएका युवाहरू फर्काउन सक्छौं ।
तपाईको प्रतिद्वन्द्वीसँगको एजेण्डामा त्यस्तो तात्विक भिन्नता लागेन ? उस्ताउस्तै लाग्यो ?
कतिपय एजेण्डा जुध्न सक्छ तर काम गर्ने शैली फरक हुन सक्छ । मुख्य कुरा काम गर्ने हो । एजेण्डा ठूलो देखाएर, गर्न नसक्ने काम देखाएर चुनाव जितेर मात्र पनि अर्थ छैन । २ वर्षको कार्यकालमा कति काम गर्न सकिएला, कति पूर्ण रूपमा सकिएला, कतिपय कुरा सुरु गर्न सकिएला, त्यो एजेण्डा हुनु स्वाभाविक हो । हिजोको दिनमा कसले कति क्यानलाई योगदान दियो त र कति गरेर आयो भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ ।
चुनावमा खर्च पनि ठूलै लाग्ला । त्यो कसरी जुटाउनुहुन्छ ?
हाम्रो टिम छ । हाम्रो टिमले एकअर्कालाई साथ सहयोग गरेरै हामी यो बजेट जुटाउँछौँ ।
चुनावमा जीतहारको सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । जित्दा वा हार्दा के गर्नुहुन्छ ?
जितेँ भने म आफ्ना एजेण्डा पूरा गर्न लाग्छु । आफ्नो सम्पूर्ण टिमसँग मिलेर क्यान महासंघको केन्द्र, जिल्ला र प्रदेश सबै सदस्यहरूसँग हातेमालो गर्दै उहाँहरूको समस्या के छन् त्यो सबै बुझेर अगाडि बढ्छु । हारेको अवस्थामा म आफ्नो काम, व्यवसायमा लाग्छु ।
हेर्नुहोस् भिडियो अन्तर्वार्ता :-
२४ वर्ष क्यानमा रगत पसिना बगाएँ, त्यसको कदर भएछ भने कुशल नेतृत्त्व दिन्छु !''
Prevएन्पिनोगले काठमाडौंमा सूचना प्रविधि सम्मेलन गर्ने
प्रदेशका हरेक घर अभावरहित हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री पौडेलNext